कसको विश्वास गर्ने कसको नगर्ने , सयौं मेनपावरका सयौं कुरा | "हरेक घरमा धारो होस्, हरेक गाउँमा सिंचाइ होस्"
कसको विश्वास गर्ने कसको नगर्ने , सयौं मेनपावरका सयौं कुरा
December 3, 2017 by POLAND NEPAL
बालकृष्ण लम्साल पोल्यान्ड हाल नेपाल
म नेपाल आएको । पोल्यान्डको भिजा नलागेका , पोल्यान्डको अस्थायी कार्ड पाउन नसकेर पिडित भएकाहरु , पोल्यान्डमा जागिर नपाएर रन्थनिएकाहरुलाई अहिले नेपाल उर्वर भुमी भएको रहेछ । पचास वटा मेन पावरको पचास कुरा छन् ! कसैले के कसैले के ? कसै कसैले पोल्यान्डको नाममा डुप्लिकेट कागज गराउने गिरोह पनि छन् रे भन्ने पनि सुनियो ! कागजात नै नक्कली वास्तविक खर्च कति भनेर नेपाल सरकारलाई सोध्दा ८५ हजार रे ? सरकारको पनि चुतिया कुरा , जब कि ईन्डिया र नेपाल हिड्दा नै १ लाख सकिन्छ कसरी पोल्यान्ड जस्तो देशमा ८५ हजारमा पोल्यान्ड पठाउन सकिन्छ मेन पावरको कुरा ।
पोल्यान्डको दुतावास नेपालमा छैन एक जनाको भिजा अप्लाई गर्न ईन्डिया जानैपर्छ भिजा अप्लाई गरेर थोरैमा चौध दिन कुर्नैपर्छ । होटेल खर्च यातायात खर्च अन्य खर्च हिसाब गर्ने कि नाइ ? अनि कसरी ८५ हजारमा काम गर्न सकिन्छ त्यो त कुनैपनि हालतमा काम गर्न सकिदैन एक मेन पावर एजेन्टले बताए ।
फेरि अर्का व्यक्तिले पोल्यान्ड नेपाललाई बताए हिजोका दिनहरुमा ईन्टरनेटबाट सजिलो तरिकाले पोल्यान्ड दूतावासमा डेट लिन सकिन्थ्यो तर आज भोलि सकिदैन । भिजा डेट लिने गिरोह नै छ रे । कसैको नाममा डेट लियो रे अनि इडिट गरेर २५ हजार , ५० हजारमा डेट बेच्छन् रे तर पोल्यान्ड इन्डियन दूतावास मौन छ । सहि तरिकाले काम गर्ने व्यक्तिहरुलाई धेरै गाह्रो परिरहेको छ रे उनले बताए । भिजाको लागी डेट लिन गएका वास्तविक जानकारी लिन अल्मलिरहेका छौ पचास एजेन्टहरुको पचास कुराले हामि अल्मलमा परेका छौ ! एक पोल्यान्ड आउन खोजेका व्यक्तिले बताए !
बालकृष्ण लम्साल भन्छन् “नेपालमा पोल्यान्डको यथार्थ बुझ्न नखोज्ने जमात पनि भेटाए कोहि बुझेर बुझ पचाए जस्तो गरेको जमात पनि भेटाए कुनैबेला साउदी अरबको लागी जसरी बिज्ञापन आउथ्यो त्यसै गरी पोल्यान्ड र माल्टाको नाममा बिज्ञापन नछापिएको कुनै पत्रपत्रिका छैन !”
सरकारको निति ठिक नभएको कारणले शुद्ध रुपमा बैधानिक ढंगले मेनपावर सन्चालन गरेको कम्पनीले पनि दलालीको आरोप लाग्नु ठिक होइन एक जना मेनपावर व्यवसायीले बताए ।
फेरि बिदेशबारे बुझ्ने एक जना दाङबाट काठमाडौ आएकाले सयौं मेनपावरको सयौं कुरा गर्ने मेनपावरको पनि कुनै एकरुपता न भएपछि उनिहरुमाथि पनि शंका गर्नुपर्ने र बिभिन्न घटनाहरुले पनि शंकाको वातावरण बनेको हो ।
अर्का पोल्यान्ड जसरी पनि पठाउन खोज्ने अभिभावकले बताए बिदेश पठाउन लाग्ने लगानी नै स्वदेशमा केहि गर्ने हो भने केहि गर्न सकिन्छ
मेरो छोरो काम नै गर्दैन , बिदेश मात्र भन्छ । मलाई युरोपमा छोरोले दुख कस्तो हुन्छ भन्ने बुझोस । भनेको सुन्दैन नेपाल पनि केहि गर्न सकिन्छ । किन कि धेरै सम्झाए हालत खराब भो अहिले आफै छोरालाई बिदेशको दुखबाट सिकोस भनेर भएपनि पठाउन वाध्य छु । बिदेशका बिभिन्न भुमीमा बसेर नेपाल गएका व्यक्तिले बताए ।
पोल्यान्ड आउन खोज्ने काठमाडौका आकाशको व्यथा फरक छ म धेरै दुख गरे मलाई थाहा छ पोल्यान्डको कमाइ ५० हजार छ । १२ देखी १४ घन्टा काम गर्नुपर्छ तरपनि म जग्गा बेचेर होइन रिण गरेर होइन केहि खर्च गरेर पोल्यान्ड जाने प्रक्रियामा छु । दुख गर्न सकेछु गरुला सकेन भने युरोपको वातावरण बुझेर नेपाल फर्किएर भएपनि व्यवसाय गरुला ।
पोल्यान्डमा रहेका केहि व्यक्तिहरूलाई बुझ्दा सत्य कुरा भनेर दुबै जना राजी भएर गरेको काम भए पनि कसैको काम नै नहुने गरि अलपत्र पार्नु ठिक होइन ।
कम्पनीमा लिएर कम्पनीमा काम गर्न सक्दैन नेपालबाट पहाड फोर्छु भनेर आउने आए पछि नसक्ने अनि कम्पनिलाई दोष लगाउने त्यो पनि गर्नु भएन ।
← प्रेम गीत २ को केहि प्रेम पोल्यान्डमा नेपाली भाषा घुम्ती कक्षा संचालनको लागि पनि
पोल्यान्ड नेपालमा विना आधार प्राप्त केहि प्रश्नहरु →